Bindu mazano - Pond Arbor | Art sens - mazano eimba nebindu
20.04.2019 Yakatumirwa na: Art Sense
Arbor, Kunze kwekona, Iro bindu
Dziva arbor nziyo dzakanaka, asi dzakanyanya kuoma kuita mazano egadheni, nekuda kwezvakawanda zvakakosha izvo zvinofanirwa kutariswa mukuvaka. Hatisi kuzogara pavari pano, asi tizingotaridza zvimwe zvinoshanda. In zvinyorwa zvekugadzira puru и imwe ine tsime, isu takarondedzera mazhinji ematanho ekutanga mukuvaka nekuchengetedza pombi yekugadzira muyadhi. Kutenderera kwemvura pamwe nekurapwa kwayo pamwe nekugadzirira kwakasiyana-siyana kwakakosha zvakanyanya kuti tirege kubatwa. Ukuru, chimiro, zvigadzirwa uye zvimwe zvinhu zvinoenderana nemaitiro emunhu, hunyanzvi uye fungidziro. Kugadzira mamiriro ekuumbwa pamwe ne gazebo, pamwe nekutarisa nyika uye kuronga maruva uye mhando dzezvidyarwa rimwewo basa rakaenzana. Nekudaro, kana iwe ukakwanisa kubata, iwe uchave uine wakasarudzika uye wakanaka nzvimbo yemunda nzvimbo yekunakidzwa, kufungisisa, zororo.
kuronga gadheni, gazebo mubindu, gazebo muyard, bindu, dziva romunda, lake rine gazebo, mazano ebindu, mazano eaya, mamisirwo edzidziso mazano, nyika kuronga, landscaping, kutenderera munda, maruva, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Chinangwa chitsva chezvinhu zvekare
Zvinhu zvekare mubindu. Isu tese takarongedzerwa midziyo nezvinhu zvedu mumba medu, takakandirwa mumakir.
Yakanaka kunze kwekona
Heano mamwe akanaka edzimba mazano anogona kukurudzira kuti iwe ushongedze uye ushongedze ...
Idea yekugadziridza kwebindu
Iyi ipfungwa iri nyore uye yakajeka inonakidza yekuti unozvigadzira sei ...
Zviitire wega musungo
Pfungwa yekutsanangura kuti munhu wese angagadzira sei muswe wekuteya nekwavo zviri nyore ...
Pfungwa yepakutanga uye inonakidza yekushongedza kwebindu. Inogona kushandiswa chaiyo ...
Yakatsanangurwa mumitsetse inotevera uye yakaratidza muvhidhiyo iro zano rekugadzira nemaoko ...
Bindu mazano - Kona ine yakavhurika mabwe kunzwa uye pergola
Pfungwa zhinji dzebindu ndedzekugadzira nharaunda ine zvinonyanya kugadzira kana kuita ...